भोलिबाट ग्रामीण विकास लघुवित्तको ५.८२ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, सस्तैमा उठाउने मौका Bizshala -
भोलिबाट ग्रामीण विकास लघुवित्तको ५.८२ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, सस्तैमा उठाउने मौका
काठमाण्डौ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नबिकेको ५ लाख ८२ हजार ८४४ कित्ता सेयर भोलि बुधबारदेखि लिलामीमा राख्ने भएको छ ।
संस्थाले हालै आफ्नो चुक्त पुँजी ६५ करोड ५० लाखको ५०% अर्थात ३२ करोड ७५ लाख मूल्यबराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । संस्थाले रु. १०० अंकित ३२ लाख ७५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोमा जम्मा २६ लाख ९२ हजार १५६ कित्ता सेयरका लागि ५० हजार २८७ वटा आवेदन परेको थियो । यो कुल निष्काशित हकप्रद सेयरको ८२.२१% हुन आउँछ ।
संस्थाले नबिकेको १७.७९% हकप्रद सेयर लिलामीमा राख्न लागेको हो। जसमा संस्थापक समूहतर्फको ३ लाख ९२ हजार ३९३ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फ १ लाख ९० हजार ४५१ कित्ता लिलामीमा राखिने छ ।
लगानीकर्ता साउन १५ गतेसम्म न्यूनतम रु १०० वा सोभन्दामाथि दररेट कायम गरी गोप्य शिलबन्दी पेस गर्नुपर्ने छ ।
सेयरको बिक्री प्रवद्र्धकमा एनआईबीएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले एनआईबीएल एस क्यापिटलको लाजिम्पाटस्थित कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरु लालदरबार काठमाडौँ, लेगनलेख ललितपुर, चिप्लेढुंगा पोखरा, ट्राफिकचोक बुटवल, आदर्शनगर वीरगन्ज र गोल्छाचोक विराटनगरमा तथा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडका शाखा कार्यालयहरु नारायणगढ, हेटौँडा, बिर्तामोड, जनकपुर, तुलसीपुर, दाङ, सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीमा तथा ग्रिन डेभपलपमेन्ट बैंक लिमिटेड बागलुङमा बोलपत्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यो लिलामीसहित कुल हकप्रद सेयर बिक्रीसँगै संस्थाको चुक्ता पुँजी ९८ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यो संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तेश्रो त्रैमाससम्म १६ करोड ४४ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ ।
Grameen Bikash laghubitta Bitiya Sasthan Ltd auction share first microfinance laghubitta bittiya sastha
सेयरको नशाले जागिर छाडे, अहिले कमाउँछन् मासिक २ लाख
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । विश्वमै सेयर बजारमा लगानी गर्ने...
लघुवित्तको सेयर रु. १०० मा पाउने अवसर खुल्दै
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा महङ्गो मूल्यमा खरीदबिक्री हुने लघुवित्त...
जीवन बिमामा झुम्मिए लगानीकर्ता, नेपाल लाइफमा बम्पर लाभांशको
काठमाण्डौ । केही दिनयता नेप्सेमा देखिएको गिरावटले साताको अन्तिम...
मर्जरमा जान लागेका सिर्जना फाइनान्स र महुली लघुवित्तको सेयर
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) ले मर्जर...
बैंक खाता अपडेट गर्नुभयो ? नेरुडे र तारागाउँले पठाउँदैछन् नगद
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पारित नगद लाभांश नेरुडे...
बुधबार पनि बजारमा करेक्सन, सस्तोमा सेयर उठाउन लगानीकर्ताको
काठमाण्डौ । बजारमा करेक्सनको यात्रा बुधबार पनि जारी रह्यो । यो दिन...
नेप्सेको बेवसाइटमा झेल, अंकमा किन खाँदैन मेल ?
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को अनलाइन कारोबार...
ब्रोकर अफिसमा ‘बुलिस फिभर’: डिस्प्ले रुममा रमिता, ब्रोकरलाई
काठमाण्डौ । लामो समयसम्म दिनभरजसो झिंगा मारेर बस्नुपर्ने...